नेपाल आज | जहाज घाममा सुकाउने अनि सरकारी अनुदानबाट तलब खाने ? (भिडियोसहित)
जहाज घाममा सुकाउने अनि सरकारी अनुदानबाट तलब खाने ? (भिडियोसहित)
बच्चुनारायण श्रेष्ठ नेपालको पर्यटन क्षेत्रबार अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पर्यटन व्यवसायी हुन् । उनको आफ्नै ‘वर्ल्ड वाइड ट्रेकिङ नेपाल’ नामक एजेन्सी पनि छ । व्यवसायका अतिरिक्त उनको रुची अनुसन्धानमा छ । नेपालका अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्र, सम्भावना, चुनौती, समस्या र समाधानका सूत्र श्रेष्ठसँग छन् ।
नेपालआजसँगको कुराकानीमा उनी वर्तमान सरकार र सरकारले थालेको अभियानमा उनी औसतमा उनी सकारात्मक देखिए । भिजिट नेपाल–२०२० का लागि सरकारले गरिरहेको तयारीका सम्बन्धमा पनि उनले फरक तर महत्वपूर्ण धारणा राखे । नेपाल आउने पर्यटकलाई दुई चार वटा मात्रै भए पनि पर्यटनका नयाँ गन्तव्य हामीले दिन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
पर्यटनको पूर्वाधार भनेको विमानस्थल, हवाई सेवा, सडक, स्वच्छता आदि हुन् । यस्ता विषयमा सरकारले काम गरिरहेको तर ढंग नपुर्याई गरेको श्रेष्ठ दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व त ल्याइन्छ । तर उसलाई कुनै लक्ष्य दिइँदैन । काम गरे राम्रै भयो, नगरे पनि सरकारले वास्ता गर्दैन । अब यसरी हुँदैन । अब नियुक्त गर्नुअघि नै लक्ष्य दिनु पर्छ । लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नेलाई तत्काल हटाउने तत्परता सरकारले देखाउनु पर्छ ।’
नेपाल वायु सेवा निगम प्रभावशाली भइदिएको भए विश्वभरबाट सस्तो हवाई भाडामा पर्यटकहरु नेपाल आउन सक्ने थिए । अहिले नेपालको दूर्भाग्ग, नेपाल आउने पर्यटकले ६० प्रतिशत खर्च हवाई भाडामा गर्नुपर्छ । ४० प्रतिशत मात्रै नेपालमा अरु कामका लागि खर्च हुन्छ ।
श्रेष्ठले नेपाल वायु सेवा निगम बलियो बनाउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । नयाँ पर्यटनमन्त्रीबाट आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटन वर्षको राष्ट्रिय संयोजकमा पर्यटनसँग गोरु बेचेको साइनोसमेत नभएका सुरज वैद्यलाई ल्याइएकोमा पनि उनलाई आपत्ति छैन । उनले पर्यटनको सम्बन्ध सबैतिर हुन्छ । उनलाई ल्याएर पनि बिग्रेको केही छैन । राम्रो काम भयो भने पुग्छ ।
भूकम्पले नेपाल लडेको मात्रै हो, मरेको होइन भन्ने मान्यता राख्ने श्रेष्ठले नेपालमा पर्यटनको सम्भावना प्रचुर रहेको बताउँछन् । नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, प्रचार प्रवद्र्धन गर्ने काममा हामीले मेहनत गर्नुपर्ने उनले बताए ।